Ajay Devgan oo filimka Shivaay ku muujiyay in aan action lagu gaari karin. Daawo - iftineducation.com
Ajay Devgan oo filimka Shivaay ku muujiyay in aan action lagu gaari karin. Daawo
iftineducation.com – Jilaaga Bollywood ee action ka ku ah caanka Ajay Devgan ayaa filimkiisa cusub ee Shivaay kusoo bandhigay xeeladiisii lagu yaqaanay ee dagaalka ama action ka ah waxuuna Ajay muujiyay in uu wali u sareeyo jilista actionka oo uu caan ku ahaa.
Filimkan Shivaay ayaa ah mid action ah oo ku saabsan qiso Ajay uuku matalayo in laga afduubanayo gabadha uu dhalay
taas uuso badbaadanayo ayaa waxey filimka ka dhigtay mid xiiso badan oo dareen jaceyl famil iyo dagaalba leh wadata.
Ajay ayaa waxaa lagu xasuustaa guulahii uuka gaaray filimada blockbuster ka noqday sida Singham iyo Son of Sardaar waxaana la filayaa inuu dib ugu soo laabto kaalintiisii hogaaminta actionka waa hadii uusoo baxo filimkan Shivaay maalinta beri ah.
>>Halkaan ka daawo goos-gooska filimka.<<
Cudurka Infekshanka Kaadida iyo calaamadaha lagu garto
Daawo Gabadhi Calanka Somalia Gubtay Oo Wadada Lagu Garaacay Sheekada Jawaab Wey Dhaaftay Gacmaha Liskula Tagay